कालीगण्डकी दोहन नियन्त्रणमा व्यवधान
पर्वत । जलजला गाउँपालिकाले नदीजन्य वस्तुको अव्यवस्थित र अवैध दोहन नियन्त्रणका लागि गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध आएको छ । गाउँपालिकाभित्र पर्ने कालीगण्डकी नदीतटीय क्षेत्रका क्रसर व्यवसायीले गाउँपालिकाको निर्णय नमानेको खुलेको छ । प्रदेश सरकारको नीति, अदालत र अख्यितारको निर्देशन, सरोकारवालाको सुझा...
बलेवा । बागलुङको ताराखोलामा निर्माण हुने १ दशमलव ७ मेगावाट क्षमताको मध्य ताराखोला जलविद्यत् आयोजनाका लागि लगानी जुटेको छ । आयोजनामा प्रभु बैंकले एकल लगानी गर्ने भएको छ । मध्य ताराखोलाको निर्माण सम्पन्न गर्न रू. ३४ करोड लगानी हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये रू. २७ करोड २० लाख प्रभु बैंकले लगानी गर्न...
कास्की । प्रदेशमा सरकार गठन भएसँगै प्रदेशको कानुन निर्माण, कर्मचारी समायोजन,नीति तथा कार्यक्रम, भौतिक विकासका योजना निर्माणलगायतमा प्रदेश सरकार जुटेका छन्। सबैभन्दा पहिले ६ नम्बर प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशको मुकाम र नामकरण गरेको छ भने दोस्रो चरणमा प्रदेश–४ को मुकाम पोखरा र प्रदेशको नाम गण्डकी राख...
पूँजी बजारको पहुँच र सम्भावना
काठमाडौं (अस) । प्रदेश–४ मा पूँजी बजारको विकासको सम्भावना एकदमै राम्रो देखिएको छ । यस प्रदेशमा ११ ओटा जिल्लाहरू मुस्ताङ, म्याग्दी, मनाङ, गोरखा, लमजुङ, कास्की, तनहुँ, बाग्लुङ, पर्वत, स्याङ्जा र नवलपरासी बर्दघाट सूस्तापूर्व रहेका छन् । हालसम्ममा जम्मा ३ जिल्ला पोखरा ७, बाग्लुङ १ र लमजुङमा १ गरी ९ स्टक...
सरकारी अस्पतालको अवस्था दयनीय
सुनिता आचार्य तनहुँ । गण्डकी प्रदेशका अधिकांश जिल्लाका सरकारी अस्पतालको अवस्था एकै खालको देखिएको छ । प्रदेश राजधानी पोखराको सबैभन्दा ठूलो अस्पताल पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल उपकरणविहीन छ । प्रतिष्ठानमा अत्यावश्यक उपकरण नहुँदा सेवाग्राहीले सास्ती खेप्...
[caption id="attachment_275306" align="alignright" width="100"] किरण गुरुङअर्थमन्त्रीगण्डकी प्रदेश[/caption] मुलुक सङ्घीयता गएपछि प्रदेश सरकार गठन भएको धेरै भएको छैन । जिम्मेवारी प्राप्त भएपछि २०७५÷७६ को बजेट पारित भएको छ । गत साउनबाट कार्यान्वयनमा पनि आइसकेको छ । बजेट कार्यान्वयनको १ महीना मात्र...